Version 0.3.3 – 9 New asụsụ
September 6, 2009 site na rịọ 12 Comments
Ga-amasị anyị na-ekele Google n'ihi na na-agbakwunye akwado 9 asụsụ ọhụrụ: Afrikaans, Belarusian, Icelandic, Irish, Macedonian, Malay, Middle, Welsh na Yiddish. Anyị kwukwara nkwado anyị WordPress ngwa mgbakwunye emi ama ada ekpri mgbe n'ihi na ndị na-esonụ pụrụ iche nke. Nso ọkọlọtọ anyị kwesịrị iji maka Yiddish? Ihe mbụ ga-amasị anyị kwuru bụ ọkọlọtọ ndị na-agbanwe agbanwe, dị na-agbaso FAQ ma ọ bụrụ na ị na-amasị anyị na nhọrọ, ọ dịghị onye a na-ese na ị.
Mgbe obere arụmụka anyị kpebiri inye Yiddish European Union ọkọlọtọ n'ihi ihe abụọ, otu – asụsụ malitere e, ọ bụghị ihe ọ bụla a kapịrị ọnụ na obodo nke abụọ – ọkọlọtọ anaghị ada maka ihe ọ bụla a kapịrị ọnụ na obodo a yiri ụzọ asụsụ nke enweghị ike ejikọrọ na mba ọ bụla. Ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere mma aro, anyị na-na-emeghe iji nụrụ ka ha.
Nke a na-ufụn nakwa ndị a izu ole na ole nke idere, nke anyị a na-eji nwayọọ na-eche echiche ma na-ekwurịta ihe ọhụrụ atụmatụ, nke anyị na-atụ anya ka anyị na-enwe ike hapụ anya, ọ bụla enyemaka na nzaghachi ga-ọ bụghị nanị na a ga-akpọrọ, ma a ga-enyere anyị aka na ịnyefe mma ngwaahịa.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: ọkọlọtọ sprites, google ntụgharị, obere, ọzọ asụsụ, tọhapụ, WordPress ngwa mgbakwunye
July 19, 2009 site na rịọ Ahapụ a Comment
Anyị na-atụ anya ka ị ụtọ a tọhapụ.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: Hapụ ọkwa Akpado Na: CSS sprites, ọkọlọtọ sprites, obere, tọhapụ, WordPress ngwa mgbakwunye
CSS sprites abịa
July 9, 2009 site na rịọ 3 Comments
The ọzọ version, nke na-abịa na njedebe nke na-esote izu ga-agụnye nkwado maka CSS sprites maka ọkọlọtọ wijetị. Nke a nwere uru na okwu nke na-agba na ọnụ ọgụgụ nke arịrịọ mere na sava weebụ. The koodu bụ ugbua arụsi ọrụ ike na a na saịtị na anyị ga-aghọta na ị ka anyị mara nke ọ bụla mbipụta ị na-ezute na ahịa n'akụkụ (abụghị ọkọlọtọ ihe nchọgharị – IE6, wdg).
Onye ọ bụla na-achọ ime koodu maka a atụ ogho, na-karịa nabatara ịkpọtụrụ anyị iji na-enweta tupu ntọhapụ koodu.
Gbara akwụkwọ N'okpuru: General Ozi Akpado Na: CSS sprites, ọkọlọtọ sprites